10 Qodob oo si sahlan aad Qoyskaaga farxad ku heli kartaan (Talo ku anfaceeysa ) - iftineducation.com
10 Qodob oo si sahlan aad Qoyskaaga farxad ku heli kartaan (Talo ku anfaceeysa )
Haddaba akhriso 10 qodob oo ka qayb qaata farxada qoyska:
Si aad ugu soo baxdid mid qoyskiisa ama ka mustaqbalkiisu ay faraxsanyihiin fadlan raac talaabooyinkaan.
Daacadnimo:ma jirto wax ka qaalisan oo lagu farxo lamaane daacad kuu ah markaasna ka shaqaynay sidii aad u higsan lagayd horumarka aad ka damacsantahay nolosha.
Howlkarnimo iyo firfircooni:labada qof ee is qaba marka ay doonayaan in gurigoodu uu noqdo beer dhalaalaysa oo loosoo xiiso waa in laga helaa labada lamaane mid walba howlkarnimo dheeraad ah oo uu muujiyo xiliga guriga iyo bulshada dhexdeeda intaba.
qalbi furnaan:guriga lamaanaha ku nooli haday kala aaminsanyihiin waxyaalo keeni kara aamusnaan, baqdin iyo canaan waxaa dawo u noqon kara in labada ruux ay isu muujiyaan qalbi furnaan iyo kalgacayl.
Qiimayn:guri aan qiimayn iyo ixtiraam oolin ha noqoto labada lamaane ee is qaba ama xigaalka, deriska iyo xididkee waxa uu noqonayaa meel aan la jecclaysan waxaana ka soo baxaya farxad la’aan keeni akarta dhibaato weyn.
Nadaafad:bilnaanta jir ahaaneed, guri ahaaneed iyo muuqaal wanaagsan waxay kordhiyaan oo kor u qaadaan xubiga iyo wanaaga ay isku hayaan labada lamaane, waxaana soo ifbaxaya udgoonka iyo quruxda ay leedahay nolosha lamaanaha ah.
Kalsooni:kalsooni daradu waa cuqdad ka dhalata kas ama kama ha u dhacdee waxyaalo uu qofku ka dareemo lamaanihiisa si farxadu u labajibaarmato qofwalba waxaa laga doonaya inuu ka shaqeeyo siduu u dhisi lahaa kalsooni adag oo aan suurto galineyn in labo lamaane isqabtaan.
soo jiidasho:nooca soo jiidasho ee raali galisa mid walba oo lamanaha ka mid ahi waa inuu muujiyo rabitaan, qanacsanaan iyo aaminaad dheeri ah iskuna dayaa qofwalba oo ka mid ah inuu kankale usoo jiito sidii magandkii oo kale.
SIR CULUS : Hubaal marka aad sidaan Dareenka dumarka u kiciso ineey kugu waalan doonto